Logoo duubatti Seenaa jiru - Project dldl/ድልድል
Piroojektiin dildil kan dhabbatee/hundeeffamee jechaa tigiriffaa dildil jedhuu irra yoo ta’uu hiikni isaas riqichaa jechuudha.
Jechii kun piroojekrichaa kan sirriitti ibsuudha. Sababiin isaas qo’annoo kallattii adda addaa gara tokkotti fiduun qo’annoo waliin uumuun miidhaawwan biyya ogummaa kallattii adda addaa ilaaluu waan danda’eefi.
Akkuma jabiina hundee riqichaa abba qabeenya irratti gatuun biyya piroojektichii itti rawwaatamuu ogeessota hirmaachisuun bu’aa gaarii galmeessisuu dha. Logoo dizayinii kan godhamee dararrama aadaa qabeessa dhorkuuf —— fi qorannoo saayinsawaa ta’ee gaggeessan hirmachiisuun rakkoolee furuudha. Sararii adiin jidduutti mul’atuu kunimmo ogeessotn adda addaa waliin kan itti hirmaatan ta’uu agarsiisa. Haallu diimmaan immoo kan agarsiisu dhiiga kan ibsuu yoo ta ‘uu dararramaann aadaa qabeessa miidhamaa isaan fiidan kan agarsiishudha. Haallu guraachii dararra kana keessatti warra miidhaan irra gahee imimmaan isaanii kan agarsiisudha. Riqichaa irraa ol ka’uun ol guddachaa kan ka’ee kan agarsiisu rakkoowwan jala darbuuf toftawwanii fi abdiiwwan gaga fuulduraa mul’atu ibsuudha. Dameewwan gubbaatti mul’atan kan walitti dhufan qo’annoowwan kallatti adda addaa bakka tokkotti fiduun dararraa aadaa qabeessa dhorkuuf dandii itti deemamu ibsuudha.
Dhuma irratti diizayiniin logoo kanaa kan hojjate finfinnee keessa jiraataa kan ta’an obbo Dani’eel Dastaa Hiluuf galatteefachuu barbaanna. Obbo Dani’eel fi Dr. Roomiin Istratii walitti dhufeenyan piroojektii irratti hirmaachuun logichaa haala kanaan qopheessan.